कोरोना भाइरस : निको भएकामा किन हुन्छ पुनः पोजेटिभ ? – Hamrosandesh.com
कोरोना भाइरस : निको भएकामा किन हुन्छ पुनः पोजेटिभ ?
वैशाख, २५ काठमाडौं ।
कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किएका तीन जनाको रिपोर्ट पुनः पोजिटिभ देखिएको छ ।
संक्रमितमध्ये हालसम्म २२ जना डिस्चार्ज भएका थिए।
खुसी हुँदै घर फर्केका काठमाडौं र वीरगन्जका तीन पुरुषमा भाइरस पोजेटिभ पाइएपछि पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार काठमाडौंमा एक र वीरगन्जमा उपचार गराएका दुई जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट फेरि पोजेटिभ देखिएपछि आइतबार पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको हो।
अस्पताल पुनः भर्ना हुने काठमाडौंका ५८ वर्षीय पुरुष हुन्। उनी वैशाख ११ गते डिस्चार्ज भएका थिए। डा. देवकोटाले भने, ‘फलोअपका क्रममा गरिएको नमुना परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएपछि थप उपचार र व्यवस्थापनका लागि पुनः भर्ना गरिएको हो।’ उनको पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
त्यस्तै, पर्साका ४४ र रौतहटका १९ वर्षीय पुरुष पनि पुनः अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनीहरू वैशाख १४ गते वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए। उनीहरूको पनि फलोअपमा नमुना परीक्षणमा भाइरस पोजेटिभ आएकाले भर्ना गरिएको डा. देवकोटाले बताए। उनीहरू पनि नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका छन्।
निको भएकामा किन हुन्छ पुनः पोजेटिभ ?
नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायका अनुसार तीनवटा रिपोर्टमा भाइरस नेगेटिभ देखिएपछि डिस्चार्ज गरिएको थियो। एकै दिन डिस्चार्ज भएका चार जनामध्ये दुई जनामा पुनः पोजेटिभ देखिएको हो।
डिस्चार्ज भएको तीन दिनपछि पुनः रगतको जाँच गरिएको डा. उपाध्यायले बताए। ‘जाँचका लागि रगत र थ्रोट स्वाबको नमुना लिएका थियौं,’ उनले भने।
स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौंमा पठाइएको थियो। स्वाब रिपोर्ट दुई जनाको पोजेटिभ देखिएपछि आइसोलेसनमा राखिएको छ। नेपालमा मात्र नभई चीन, जापान, कोरियालगायत मुलुकमा पुनः भाइरस पोजेटिभ देखिएको डा. उपाध्यायले बताए।
उपचारमा संलग्न अर्का काठमाडौंका चिकित्सकका अनुसार पुनः संक्रमण देखिनुका तीनवटा कारण हुन सक्छन्। उपचारपछि मृत बनेको भाइरस पुनः जीवित भएर पोजेटिभ देखिएको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यस्तै, अन्य संक्रमणका कारण पनि भाइरस पोजेटिभ देखिएको हुन सक्छ। ‘डिस्चार्ज गर्दा खेरी गरिएको एन्टिबडीको परीक्षण गरिएको थियो। आरडीटी परीक्षणमा कोरोना भाइरसविरुद्ध एन्टिबडी विकास भइसकेको देखियो। कोरोना भाइरससँग लड्न शरीरले प्रतिरोध क्षमता विकास गरिसकेको किटको परीक्षणबाट देखिएको थियो’, ती चिकित्सकले भने।
डिस्चार्ज हुने क्रममा चिकित्सकले केही साता आइसोलेट भएर क्वारेन्टाइनमा सुझाव दिएका थिए। ‘क्वारेन्टाइनमा बस्दा हेलचेक्र्याइँ भएर अरूबाट पुनः संक्रमण भएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने। निको भएको भन्दै फूलमाला लगाएर डिस्चार्ज गरिएकामा पुनः भर्ना गर्दा तनाव भएको संक्रमितका एक नातेदारले बताए। नेपालमा ९९ जनामा संक्रमण भएको छ। जसमध्ये ७४ जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। अन्नपूर्ण
कृपया यो भिडियो लाई सम्पूर्ण नेपाली समक्ष सेयर गरेर पुराई दिनुहोला भिम राईको खोजि कार्यमा सयोग गरिदिनु होला धन्यवाद !!